Izixhobo xa kuthelekiswa noVimba | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 1, 2009 NgoMvulo, nge-1 kaJanuwari, 2018 Douglas Karr
Ndenzekile ividiyo ye Tony Robbins at TED oko kwakukhuthaza kakhulu. Omnye wemigca yakhe uyinyani ngokwam:
Omnye wemisebenzi eyonelisa kakhulu endakha ndanayo yayikukuba nguMcebisi woDibaniso NgqoThagethi. Ngelo xesha, i-ExactTarget yayinonxibelelwano oluncinci lwenkqubo yesicelo (i-API) kodwa abathengi bethu babekhula ngobunkunkqele nakwi-automation. Yonke imihla kwakuyintlanganiso kunye nomthengi owayenengxaki entsonkothileyo, kwaye umsebenzi wam yayikukusombulula ingxaki usebenzisa i-API yethu elula.
Ininzi yempumelelo yam ngelo xesha yayikukuba mna rhoqo ndicinge indlela yokufezekisa injongo yokugqibela. Ukuba API khange ixhase indlela ethile, ndingasebenzisa indibaniselwano yedatha kunye neefowuni ukuyinqoba. Ngamanye amaxesha izisombululo bezinobuhle (kwaye zithathe ukuthembela kwengqondo ukusombulula). Sasiqhuba ukuqhuba amanye amantongomane emveliso kuba izisombululo zethu zazizakwenza izigidi ze API iminxeba yokufezekisa umsebenzi.
Isitshixo kwimpumelelo yam eqhubekayo kukuba kunqabile ukuba ndithi 'hayi', ukuba ikho. Ngamanye amaxesha kufuneka uguqule indlela eya kwindawo ekuyiwa kuyo. Umendo sisixhobo. Ukuba ayikho, kufuneka ube nobuchule kwaye wakhe eyakho!
Ukungabi nayo Zixhobo sisizathu sokungazenzi izinto. Izixhobo Kukukwazi ukufumana iindlela zokwenza into, ngaphandle kwezixhobo!
Nantsi intetho epheleleyo kaTony Robbins kwi-TED. Isilumkiso: Usebenzisa izinto ezithile ezimibalabala.
Enkosi Ku UAngela Maiers ukufumana!
tags: Krisimesiukuthengisa nge-imeyile i-roiImbali yokuthengiswa kwentengisou bubeleityesiIinjini zeleathiItekhnoloji yokuthengisa
Jan 2, 2009 kwi-4: 05 AM
Emva kokufunda esi sithuba, kwaye ndimamele iteyiphu yeRobbins, ndajonga izigqibo zam zonyaka omtsha, ndazikrazula kwaye ndabhala isisombululo esitsha nje esinye: "Yenze nje". Qaphela khange ndithi: “Yenza nje”.
Xa ndandingumphathi wezentengiso yaye ndiqeshe abaphathi bezentengiso ndandisoloko ndibaxelela ukuba umsebenzi wabo yayikukuyithengisa bangayithengisi. Umahluko kukusebenzisa zonke izixhobo ezifumanekayo ukuvala intengiso kwaye ukuba izibonelelo azikho ukuzidala okanye ube nobuchule njengoko usitsho.
Esi sisithuba esihle sokuqala unyaka.
NgoJanuwari 3, 2009 ngo-1:46 PM
Yeyiphi eyona ndlela iphezulu yokuba iqela lakho liqonde kwaye liphendule kolu vuselelo?
Ndingenza ntoni ukuze ndifundise oku ngempumelelo?
NgoJanuwari 3, 2009 ngo-2:52 PM
Iqala ngobunkokeli, uDerek. Iinkokeli ezinkulu ziyazigxotha izizathu. Kulungile ukuthi 'hayi', kodwa akumele kulunge ukuthi 'asikwazi kuba…'. Ukuba ishishini liyazi ukuba kufanele ukuba lenza into ethile, kufuneka babe nobuchule ekucingeni ukuba njani.
NgoJanuwari 2, 2009 ngo-2:11 PM
Enkosi ngokwabelana nale - iyakhuthaza kwaye iluncedo.
NgoJanuwari 2, 2009 ngo-4:40 PM
Yenza nje ukuba yenziwe njengoko i-SMB isitsho. Enye yezona zinto zinzima kakhulu endazoyisayo ebomini yayikukuqonda ukuba okokuqala ndisenza into ayizukufezeka kodwa ukuba ilinge ngalinye endilizamayo lokwenza into ethile isondele kwimfezeko.